amụma nzuzo | Best Way to whiten Ezé Guide
Na saịtị anyị, nzuzo nke ndị ọbịa anyị dị anyị ezigbo mkpa. Akwụkwọ iwu nzuzo a na-akọwapụta ozi saịtị anyị na-enweta ma nata saịtị ya yana otu esi eji ya.
Dị ka ọtụtụ saịtị ntanetị ndị ọzọ, saịtị anyị na-eji iji faịlụ ndekọ. Ihe omuma ndi di n’ime faili ntaneti a tinyere ntuziaka intaneti (IP) okwu, ụdị ihe nchọgharị, Onye Na-enye Internetntanetị (ISP), akara ụbọchị / oge, peeji ntụaka / ụzọ ọpụpụ, na ọnụ ọgụgụ nke clicks iji nyochaa ọnọdụ, dọọ saịtị ahụ, soro ije onye ọrụ na saịtị ahụ, ma kpokọta ozi igwe mmadu. Adreesị IP, na ihe omuma ndi ozo adighi ejikọta ya na ozi obula nke eji amata ya.
saịtị anyị na-eji kuki iji chekwaa ozi banyere mmasị ndị ọbịa, dekọọ ozi akọwapụtara onye ọrụ na peeji nke onye ọrụ ahụ ji abanye ma ọ bụ gaa na, hazie ọdịnaya Weebụsaịtị ahụ dabere na ụdị ihe nchọgharị ndị ọbịa ma ọ bụ ozi ndị ọzọ onye ọbịa bịara ziga site na ihe nchọgharị ha.
Kuki kuki Double Dlick
Google, dika onye ahia nke ato, na-eji kuki iji na-enye mgbasa ozi na saịtị anyị.
Ojiji nke Google kuki DART na-enyere ya aka ịnye mgbasa ozi nye ndị ọrụ dabere na nleta ha na saịtị anyị na saịtị ndị ọzọ na Internetntanetị..
Ndị ọrụ nwere ike ịpụ na ojiji nke kuki DART site na ịga na mgbasa ozi Google na iwu nzuzo ọdịnaya netwọkụ ọdịnaya ọdịnaya URL na-esote – http://www.google.com/privacy_ads.html.
saịtị anyị enweghị ohere ma ọ bụ na-ejikwa kuki ndị a nke ndị mgbasa ozi ndị ọzọ na-eji.
Shouldkwesịrị ị gakwuru iwu nzuzo nke ndị sava ndị ọzọ maka ndị ọzọ maka ozi ndị ọzọ gbasara omume ha yana ntuziaka maka otu esi pụọ na omume ụfọdụ.. iwu nzuzo nke saịtị anyị anaghị emetụta, anyị enweghị ike ịchịkwa ọrụ nke, ndị ọzọ na-akpọsa ngwá ahịa ma ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ iji gbanyụọ kuki, inwere ike ime nke a site na nhọrọ nchọgharị gị niile. Enwere ike ịchọta ozi zuru ezu banyere njikwa kuki yana ihe nchọgharị weebụ akọwapụtara na weebụsaịtị ndị nchọgharị.